बेष्ट फाइनान्सको एजीएम आज, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा Bizshala -
बेष्ट फाइनान्सको एजीएम आज, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । बेष्ट फाइनान्सको स्थगित २४ औँ वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) आज भदौ ३० गते हुँदैछ।
कम्पनी सञ्चालक समितिको गत साउन २८ गते बसेको बैठकले स्थगित वार्षिक साधारणसभा भदौ ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ।
यसअघि कम्पनीले गत वैशाख ३१ गते वार्षिक साधारणसभा डोकेको थियो। तर कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण सभा स्थगित गरिएको थियो।
सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले गत भदौ ८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गरिसकेको छ। यसको अर्थ भदौ ७ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र सभामा भाग लिन योग्य भएका छन्।
सभाले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियाका आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्ने पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ। सोही सभाबाट संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा महिला सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन हुनेछ।
त्यस्तै नयाँ कार्यसमितिका लागि संस्थापक तथा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकहरुको निर्वाचन पनि सभाले गर्नेछ।
Best Finance Company Limited AGM
काठमाण्डौ । नेपाल सेवा लघुवित्त र विन लघुवित्तले यही कात्तिक १५...
लघुवित्त बैंकर्स संघमा प्रकाशराज शर्माको नेतृत्वमा नयाँ
काठमाण्डौ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको आज सम्पन्न १५ औँ वार्षिक...
मिर्मिरे लघुवित्तको सीईओमा पुष्करराज जोशी नियुक्त
काठमाण्डौ । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिर्मिरे...
सपोर्ट लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक...
खराब कर्जामा सुधार गरेको बेष्ट फाइनान्सको नाफा रु. १२.११ करोड,
काठमाण्डौ । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष...
काठमाण्डौ । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष...
स्वरोजगार लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा कात्तिक २७ गते, २५%
काठमाण्डौ । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो १३...
सिभिल लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् मुख्य
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो १० औँ...